परशुरामले किन तोडे श्रीगणेशको दाँत ? यस्तो छ रहस्य | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more परशुरामले किन तोडे श्रीगणेशको दाँत ? यस्तो छ रहस्य
भदौ १९ गते, २०७६ - १२:५७
काठमाडौं । एक दिन परशुराम शिव र पार्वतीको दर्शनको लागि कैलाश पर्वत पुगेका थिए । शिवजीको दर्शनको लागि पुगेका परशुरामलाई बाटैमा गणेशजीले रोके । बाटोमा रोकिएकोमा परशुराम एकदमै क्रोधित भए । उनले आक्रोशित अवस्थामा गणेशजीलाई युद्धको आह्वान गरे ।
परशुराम र गणेशजीबीच युद्ध भयो । निकै समयको युद्ध पछि अन्ततः परशुरामले हातमा भएको बञ्चरोले गणेशजीलाई हाने । अहिलेसम्मको मारलाई रोकिरहेका गणेशले बञ्चरोलाई भने रोक्न विफल भए । कारण बञ्चरो आफ्नै पिताले दिएको हतियार थियो । बञ्चरोको प्रहारबाट गणेशजीको दाँत भाँचियो ।
भगवान शिव त्यो घटना थाहा पाउने वित्तिकै आएर दुवैलाई शान्त गराए । त्यहि घटनासँगै गणेशजीको एउटा मात्रै दाँत सग्लो रह्यो । र, उनलाई एकदन्ते भनेर पनि भनिन थालियो ।
परशुराम भगवान विष्णुको अवतार र शिवको शिष्य थिए । उनलाई भगवान शिवले बन्चरो दिएका थिए । त्यहि बन्चरोले नै परशुरामले १७ पटक क्षेत्रियलाई युद्धमा पराजित गरेका थिए । त्यहि बञ्चरोको कारण गणेश जी एकदन्ते भए ।
भदौ १९ गते, २०७६ - १२:५७ मा प्रकाशित